Kunyemwerera kukuru kunoita kunyemwerera! | Martech Zone
Kunyemwerera kukuru kunoita!
Muvhuro, March 12, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Nguva imwe neimwe yandinoshandura dingindira rangu reblog, ndasiya mufananidzo wangu pane peji rekutanga. Nguva imwe neimwe pandinoisiya, ndinowana toni yeemail uye makomendi achibvunza kuti aripi! Handimbofi ndakakanganisa zvakare - zvinondifadza kuti yakawanda sei mhinduro uye hunhu zvinounza kunzvimbo. Ini handisi narcissistic neimwe nzira, ndinonetseka nekuisa mapikicha angu pachangu pasiti. Nekudaro, ini ndinonyatsoziva kuti zvakaoma sei kuvaka hukama nemunhu wausati wamboona.
Kana mablog ari kutaurirana, unoita sei kukurukura nemunhu wausingaone? Ini ndinofanira kubvuma, ndisati ndapinza mugoro wangu unonyemwerera mumusoro, saiti yacho yakanyatsoita seyakajairika. Ini ndinoshamisika kuti zvakakanganisika zvakadii kumeso kunonyemwerera kune kukura kweblog. Chokwadi zvine zvazvinoita.
Iko kupfura kwepamusoro kwakatorwa makore angangoita mana apfuura ini pandanga ndichishandira dot com muDenver, Colorado. Ini ndinorema, ndachena musoro uye ndakapfava kupfuura zvandaive mumufananidzo unotyisa uya. Iye mutori wemifananidzo aive neakawanda tarenda! Ipfuti yandicharamba ndichitenderera pane ino saiti kwenguva yakati rebei. Kunze kwekunge chokwadi ini ndichidzoka muchimiro (kunze kwepea). Ini ndinoseka nevanhu kuti dai ndaifanira kumhanya kana kukwira bhasikoro kuti ndimhanye laptop yangu, ndinenge ndiri Mr. Universe. Chokwadi sainzi inogona kubata nesu kuti itipe hupenyu hwakanaka hwekhibhodi, pizza uye husiku-husiku chirongwa, handiti?
Zvichakadaro, ini ndichaita kuti runako rukwire kumusoro. Pandinosvika kuzosangana newe, iwe uchaona kunyemwerera kumwe uko - kunyangwe kumeso kwacho hakuna kunyatsonaka.
Yangu Yazvino Kuverenga uye Kuongorora kweWikinomics
Wikinomics: Kubatana kweMisa Kuchinja Sei Bhizinesi
Mar 12, 2007 pa 7: 46 PM
Makorokoto pakugadzirwa kutsva. Yakanaka kwazvo, uye yakachena.
(Uye zvino chinongedzo chekushambadzira chinoenda kupeji yakapfava iyo inoti ichandiendesa kupeji rekurudyi. Pane kudaro inongoramba ichizvitakura. Ndiko dambudziko reMac?)
Mar 12, 2007 pa 7: 54 PM
Fixed! Zvaingova zvamazvirokwazvo Anotyisa redirect code yandakanyora uye handina kuiyedza.
Mar 24, 2007 pa 4: 50 PM
Hongu. Iye zvino zvave kushanda. Iwe unogona kunge uchida kuwedzera "kwete" mune yako re-yakananga peji 🙂
Kana iyo peji ikatakura mushure memasekondi mashanu, tinya apa.
Mar 24, 2007 pa 4: 55 PM
Ndaizodii pasina imi varume?! Ndatenda!
Mar 12, 2007 pa 10: 17 PM
kunyangwe nezita rekuchinja "mug" yako inoita kuti inzwe senzvimbo yakasununguka yekuuya kwairi.
Mar 12, 2007 pa 10: 20 PM
Ndatenda, Steven! Ndizvo chaizvo zvandiri kufambira. Vese vanogamuchirwa… kunze kwevasina maturo!
Mar 13, 2007 pa 9: 09 AM
Doug! Kuvandudza kukuru!
Ini ndaizoti 'Bvisa sutu uye udzoke kumufananidzo wekuseka wawaimbova nawo', ndobva ndafunga kwesekondi… pamwe maviri…
Zvakanaka, tinonyatsoda mumwe mukomana akapfeka sutu achitaura nezve tekinoroji uye kushambadzira? KUNYANGE, isu tinoda chaizvo kuverenga nezve tekinoroji uye kushambadzira kubva kune slacker mujuzi (pikicha yekare)?
Saka, tinoita sei? Tinoda musanganiswa wepikicha yekutanga newe uchiseka, uye yechipiri pikicha - asi isina tie. Iyo yese 'Hushamwari/Inonakidza, isina-zvinhu, asi ichiri nyanzvi' inotaridzika uye inonzwa.
Asi hee, iko kufona kwako, uye uchiri x1000 akashinga kupfuura ini pakushandisa headshot mumusoro wako. (Ndichanamatira musoro wangu weambigram wakachengeteka kusvika ndagadzirisa… zvakare…) 😉
Mar 13, 2007 pa 10: 55 AM
Zvakanaka, ramba uchifunga kuti izvi zviri kuuya kubva kumukomana ane katuni yake mumusoro wake, asi saWilliam, ndakafarira "Doug anoseka." Asi kusiyana naWilliam, ini ndinoda tekinoroji yangu uye kushambadzira kubva kune slacker mujuzi 🙂
Mufanikiso wakanaka chose, uye chitarisiko chose chinokatyamadza - crisp, wakachena, asi wakashinga.
Mar 14, 2007 pa 6: 27 PM
Ndiri kuseka mumufananidzo uyu! Kuseka nekuti ndiri kuda kuziva kuti inguvai yekubatwa-batwa kuti ndiite kunge ndakanaka.
Mar 13, 2007 pa 11: 15 AM
Vote yaTony: Kuseka Doug.
Vote yangu: Kuseka Doug.
Vota izvozvi! 😉
Tony: Ndinoziva bhurogi rako zvakanyanya izvozvi - rako riri kuitwa neSOAP'd sezvatinotaura naRobert Hruzek (middleszonemusings.com)! Nezvebasa riri nyore sekuita iri raive! (inofanira kunge iri mwedzi wakanaka muindasitiri yekurapa)
Mar 14, 2007 pa 4: 58 PM
Ndakawana chinhu chimwe chete kubva pamufananidzo wekatsi yangu. 🙂
Inosvika pachinzvimbo chechitendero papi?
Mar 14, 2007 pa 6: 26 PM
Handina katsi. Ndine Jack Russell anonzi Cooper uye ndinovhima nekuuraya idzo katsi dzese. 🙁
Mar 14, 2007 pa 7: 05 PM
kutaura kwese uku kwezviso zvinonyemwerera uye katsi kwakasvika kwandiri saka ndakafunga kuwedzera bharaki widget yeWinExtra mascot inenge hafu yekudzika LOL ..